Maxaad kula talin lahayd Serena oo gabadheeda ay ilko u soo baxayaan?! - BBC News Somali
19 Disembar 2017
"Ilka soo bixidda way dhibbadan tahay," ayey u sheegtay asxaabteeda.
Qaar kale waxay kula taliyeen in gabadha ay u ogolaato in ay ruugto cirifka bustaha ama foodaraha, ama ay siiso xanuun baabi'iye loogu talagalay caruurta ama daawooyiin kale.
Waxaa jiro dad soo jeediyay isticmaalka caanaha naasaha, haddii weli ay naaska nuugeyso, ama ay naaska siiso illaa gabadha uu ka ba'ayo cuncunka ay ciridka ka dareemeyso.
Boomaatada ilkaha: Waxaa la mariyaa ciridka caruurta, waxaa ku jira xanuun baabi'iye, kaas oo yareynaya cuncunka ama xanuunka.
Paracetamol iyo ibuprofen: Haddii canugga uu xanuun dareemayo ama kuleylka jirkiisa uugaaro 38C, Waa in aad siiso xanuun baabi'iye aan sokor lahayn ee loogu talagalay caruurta.
La ciyaaridda canugga: In aad la ciyaarto waxay canugga ka mashquulineysaa xanuunka iyo cuncunka uu ciridka ka dareemayo
Tirada caruurta ku dhalaneysa Shiinaha oo aad sare ugu kacday